Subbly: Qalisa Insizakalo Yebhokisi Lakho Lokubhaliselwe Ngaleli Platform Ye-Ecommerce | Martech Zone
Intukuthelo eyodwa enkulu esiyibonayo ku-ecommerce yile ibhokisi lokubhalisela iminikelo. Amabhokisi ababhalisile angumnikelo othakazelisayo… kusuka kuzinto zokudla, imikhiqizo yezingane, ukuphatha izinja… amashumi ezigidi zabathengi babhalisela amabhokisi okubhalisela. Ukuba lula, ukwenza ngezifiso, ubusha, ukumangala, ukukhetheka, kanye nentengo zonke izici eziqhuba ukuthengiswa kwebhokisi lokubhaliselwe. Kumabhizinisi we-ecommerce wokudala, amabhokisi okubhalisela angaba yinzuzo ngoba uguqula abathengi besikhathi esisodwa babe amakhasimende aphindayo.
Imakethe yokubhalisa ye-eCommerce ibiza cishe ama- $ 10 billion (ngaphandle kwe-Amazon Prime kanye nenketho yayo ethi "bhalisa bese ulondoloza").
Isoftware eningi yokubhalisa ithatha ukubhaliswa njengesici sebhizinisi lakho: bayayisekela, kepha imvamisa ayinabuchwepheshe futhi ayihlanganisi kalula ebhizinisini lakho noma kuwebhusayithi ekhona. Futhi kwezinye izimo kumane nje akubhaliswa kuqala, futhi esikhundleni salokho bayimakethe-kuqala noma abakhi bewebhusayithi kuqala.
Kuningi okuyinkimbinkimbi ebhokisini lokubhalisela amandla e-commerce. Iminikelo emihle ifaka ukuphathwa kwe-akhawunti, ukukhetha okwenziwe kwaba ngokwakho, izicelo zokubambezeleka, ukufaka esikhundleni, ukuzenzakalela, futhi - yebo - ukucutshungulwa kokukhokha okusekelwe kokubhalisile. Iningi lamapulatifomu e-e-commerce adumile awafaki lawa makghono kuzingxenyekazi zawo… adinga ukuhlanganiswa komuntu wesithathu noma ukuthuthukiswa kwesiko ukuze konke kusebenze kahle.
Subbly: Ipulatifomu Yesikhwama Se-Ecommerce
Ngisiza inkampani njengamanje ukuthola zonke izinqumo abazithathayo ekutholeni insizakalo yabo phansi futhi itholwe Ngokuzithoba. I-Subbly inikela ngezici zebhokisi lokubhalisa ezilandelayo njengengqangi yesikhulumi sabo:
Ukubhalisela ukubhalisa - Thatha inkokhelo evela kumakhasimende akho ngokuqhubekayo ngaphandle kokuzenzela okuthile. Uma ikhasimende lakho selibhalisile, uSubbly uzokunakekela okusele ukuze uphumule ngokuzethemba wazi ukuthi imali yakho evela njalo iza ngeviki elizayo, ngenyanga, noma ngonyaka.
Sika izinsuku futhi usethe izinsuku zokuvuselela - Khokha wonke amakhasimende akho ngosuku olufanayo inyanga ngayinye, setha usuku olunqunyelwe usuku lokuthumela, bese ukhetha usuku lapho kuthunyelwa khona amakhasimende akho. Ukukhokhiswa nokuthunyelwa okulingana nezidingo zebhizinisi lakho.
"Yakha-ibhokisi" nezinye izidingo eziyinkimbinkimbi zokukhokha - Ufuna ukuvumela amakhasimende akho ukuthi enze ngokwezifiso okubhaliselwe kwabo ngokulungiselela izinketho, noma ngokukhetha imikhiqizo ngaphakathi kokuthunyelwa kwabo? Ungabe usaqhubeka, i-Subbly inomakhi okhethekile wenhlolovo ovumela ukubhaliswa okwenziwe ngokwezifiso kwamakhasimende akho nokukuvumela ukuthi unikeze umuzwa wangokwezifiso.
Imijikelezo yokukhokha nokuhambisa ngezifiso - Nyanga zonke, Masonto onke, Ngonyaka, Ngekota nangaphezulu! Hlanganisa imijikelezo yokuthumela neyokukhokha ukuze ilingane ngqo izidingo zakho zokukhokhiswa nokuthunyelwa kwemvamisa. Ungavumela futhi amakhasimende akho ukuthi akhethe abakukhethayo ngesikhathi sokuphuma.
Ukuthola inkokhelo kwehlulekile - Izinkokhelo zamakhadi ezihlulekayo ziyakhathaza! I-churn yokuzibandakanya ingancishiswa ngamathuluzi wethu wokuthola inkokhelo ahlulekile esakhelwe ngaphakathi kanye ne-automation.
Izinkathi zokulingwa - Vumela amakhasimende akho azame isampula ibhokisi lokubhalisela inani eliphansi futhi abavuselele kumjikelezo omfushane kunokujwayelekile ngentengo ephelele yokubhaliselwe okujwayelekile.
Izikhathi zokuzibophezela - Bhubhisa i-churn ngezikhathi zokuzibophezela. Nikeza okubhaliselwe kwezinyanga eziyi-12 okukhokhelwa njalo ngenyanga futhi unikele ngesaphulelo sokukhuthaza amakhasimende ukuthi azibophezele.
I-Subbly nayo ingahlanganiswa nesitolo esivele sikhona ku-Wix, Thenga, I-squaeverace, WooCommerce, Weebly, noma ushumekwe kumawebhusayithi akho amanje.
Subbly ngokuyisisekelo ukubhaliswa kwepulatifomu yokuqala ye-e-commerce. Ngokuhambisana nomakhi wewebhusayithi, ukuphuma komsebenzi ukuphuma, ukuhanjiswa nokuhlanganiswa kwempahla, amathuluzi wokumaketha nokukhula, ukuphathwa kwamakhasimende (CRM), nezinye izici ... kuyipulatifomu enhle eqhubeka nokwenza ngcono ukunikezwa kwayo.
Zama Subbly Mahhala
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi esihambisanayo se Ngokuzithoba kulo lonke lesi sihloko.
Tags: CRMplatform ecommercethengasquaeveracengokuzithobaibhokisi lokubhaliselaipulatifomu yebhokisi lokubhalisainsiza yokubhalisasibindekileWixWooCommerce